Wararka - Qalabka kharashka-ku-oolka ah ee mashiinka mashiinka dayactirka ah, hal meel hel
Qalabka kharashka ku baxa ee mashiinka mashiinka qaraxu ku kaco, hal joogsi hel
Iyagoo wajahaya xaalada sii kordheysa ee suuqa ee warshadaha kala duwan, shirkaduhu waxay hordhigeen caqabado sare kharashyada wax soo saarka iyo shuruudaha tayada wax soo saarka. Nidaamka toogashada toogashada ee habka wax soo saarka waa xiriir muhiim ah oo saameeya qiimaha badeecada iyo xakamaynta tayada. Wanaagsantoogtay mashiinka-engeegiyo qaabeynta kharash-ku-ool ah ee qalabka dayactirka ayaa door muhiim ah ka ciyaara xasilloonida iyo hufnaanta hawlgalka qalabka qarxa. Waa qodob toos ah oo saameeya hawlgalkatoogtay mashiinka-engeeg iyo qarashka ku baxa rasaasta.
Qiimaha qaybaha dayactirka badanaa waa muujinta waxqabad dhammaystiran, waxaana inta badan saameeya tayada gudaha. Qalabka dayactirka ee tayada sare leh ee ay soo saartay shirkadda TAA waxay leeyihiin xawaare qaraxan oo sareeya iyo karbaash ballaadhan oo isla awood ah, waxtarka qaraxa iyo tayada qaraxu waa ka sarreeyaa.Waxaa loo qaybiyaa laba qaybood: wax taaj oo kale oo looxa iyo makiinada wax taaj oo kale. Waxay doorataa qalab cayriin oo tayo sare leh waxayna qaadataa tikniyoolajiyadda daaweynta kuleylka ee horumarsan si ay si adag u xakameyso adkaanta iyo microstructure ee sheyga, waxay ka dhigeysaa nolol dheer iyo waxqabadka qiimaha sareeya.
Iyada oo sannado khibrad iyo farsamo ee warshadaha daaweynta dusha sare ah, waxaan leenahay naqshad xirfadeed iyo kooxda R&D iyo xarun toogasho madaxbanaan R & D. Dhammaan alaabooyinka waa la soo diri karaa ka dib baaritaanka adag ee alaabada, rakibidda & dib-u-hagaajinta ka hor intaadan ka bixin warshadda.
Nidaamka wax soo saarka ee mid kasta oo ka mid ah qeybahayaga dayactirka ayaa ka gudbay xakameyn wax soo saar adag iyo hababka kormeerka tayada. Moodooyinku way dhameystiran yihiin sidoo kalena waa loo qaabeyn karaa iyadoo loo eegayo baahida isticmaale. Tani waxay si weyn u yareyn kartaa qiimaha qaybaha iyo inta jeer ee qalabka lagu ilaaliyo, taasoo markaa yareyneysa kharashaadka shaqaalaha ee dayactirka Waxayna yareyn kartaa qiimaha waqtiga la joogo.
TAA Metal waxay si qoto dheer ugu lug lahayd warshadda toogashada wax ka badan 40 sano waxayna u adeegtay macaamiil badan. Shirkaddu waxay leedahay tiro injineero sare oo xirfadlayaal farsamo yaqaan ah oo aqoon u leh moodeellada guud ee gudaha iyo shisheeyaha ah, kuna dhaqma isticmaalkatoogtay abrasives qarxaya, qalabka taageerada farsamada, iyo casriyeynta mashiinka qarxa. Khibrad iyo tiknoolajiyad labadaba waa kuwo lagu kalsoonaan karo waxayna kaa caawin karaan inaad "ka hortagto dhibaato yar oo si fudud loogu xalliyo dhibaatooyinka waaweyn" qalabkaaga.